Ny Galaxy Note 7 izay tsy tafaverina Samsung dia hanala azy ireo lavitra | Vaovao momba ny gadget
Ny Galaxy Note 7 izay tsy tafaverina Samsung dia hanala azy ireo lavitra
Samsung dia manandrana mamarana hatrany ny olanao vaovao Galaxy Note 7 eo imason'ny rivodoza, noho ny olan'ny batterie izay mahatonga ny fitaovana hipoaka. Andro vitsy lasa izay ny orinasa Koreana Tatsimo dia nanambara fa izay rehetra efa nahazo ny fitaovany dia tsy maintsy mamerina azy io hanakalo azy ary hahazo iray vaovao, miaraka amin'ny olana amin'ny bateria efa namboarina.
Na izany aza, dia toa kamo ny mpampiasa sasany ary mbola tsy manome ny Galaxy Note 7. Noho izany Samsung dia nanambara fa ny fitaovana rehetra tsy tafaverina dia hofoanana tsy ho ela hanoloana azy., mijanona tsy miasa.
Ny 7 fe-potoana farany hamerenana ny Galaxy Note 30. Hatramin'io fotoana io, ny fitaovana rehetra dia ho voahilika lavitra, na dia mieritreritra aza isika fa ny mpampiasa izay tratran'ity toe-javatra ity dia afaka mankany Samsung mba handray Note 7 vaovao ary hanome ny terminal misy azy ireo izay tsy hivily akory.
Samsung dia nandray ny olany tamin'ny haingany vaovao ary toa tsy vonona ny hamela naoty Galaxy 7 na dia iray aza eto ambonin'ny tany misy olan'ny bateria. Ho hitantsika raha mahavita ny famaranana ireo olana nanova ny sori-dalan'izy ireo ity orinasa Koreana Tatsimo ity ary koa nanimba be ny iray amin'ireo kintana mahafinaritra eo amin'ny tsenan'ny finday.
Efa nanolotra ny Galaxy Note 7 ve ianao mba hahafahan'i Samsung manova azy tsy misy olana amin'ny batteriny?.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » telephony » Finday » Ny Galaxy Note 7 izay tsy tafaverina Samsung dia hanala azy ireo lavitra
Kinmen dia hoy izy:
Izany dia ny mpampiasa sasany manao ny eddies, tsara ny feo, saingy tsy mifanaraka amin'ny zava-misy izany, satria hatramin'ny fanambarana ny andro 9 farany, tsy voatery izany ary tsy nilaza izy ireo fa tokony haverina izany.
Ny kamo dia Samsung, fa hatramin'ny andro 2 farany, izay rehetra nangataka fanovana an-tsitrapo dia tsy nifandray taminay.
Valiny amin'i Kinmen
Zuli esther fernandez gsrcia dia hoy izy:
Notakiako ny toerana nividianako azy ary lazain'izy ireo amiko fa hampahafantarin'izy ireo na kamo aho, tsy misy zavatra azo antoka fa hikiry ihany aho
Valio i Zuli esther fernandez gsrcia
Ary misy ve gaga fa afaka mahazo kapila lavitra?
Finday finday mankany amin'ireo tsy mahamenatra, amin'ity modely ity ary azo antoka fa hafa rehetra.
Martin Caicedo dia hoy izy:
Mba hamonoana finday dia mandefa lisitry ny imei fotsiny amin'ireo mpandraharaha izy ireo ary mametraka azy ireo ao amin'ilay lisitra voasakana, toy ny fanaony amin'ireo finday halatra. Izy io dia zavatra tena tsotra atao.
Valiny tamin'i Martin Caicedo
Manomboka misintona ireo terminal avy eo amin'ny tandavan Lumia eo an-tsena i Microsoft
MiniBatt, izao no fiasan'ny rafitra famandrihana tsy misy tariby ho an'ny telefaona